१ प्रतिशतको हातमा मात्र हुने यस्तो चिन्ह के तपाइको हातमा छ? भए यस्तो हुनेछ भविष्य (भिडियो) – Khabar Aajako
१ प्रतिशतको हातमा मात्र हुने यस्तो चिन्ह के तपाइको हातमा छ? भए यस्तो हुनेछ भविष्य (भिडियो)
आजको खबर | प्रकाशित : २०७६ असार १७ गते १:४५
ज्योतिष विद्या यस्तो विद्या हो जसले केही न केही तरिकाबाट मानिसको भविष्य बताउँछ । पछिल्लो समयमा यो विद्या प्रमाणित पनि भइसकेको छ । विभिन्न तरिकामध्ये ज्योतिष विद्याको एक तरिका हो हस्त रेखा । यही रेखाको माध्यमबाट ज्योतिषले तपाईँको आफ्नो जीवनको बारेमा धेरै कुरा बताउँछन् ।
हस्तरेखाका अनुसार पुरुषको दायाँ हात र महिलाको बायाँ हातको रेखा हेर्न गरिन्छ। हरेक व्यक्तिको हत्केलामा विभिन्न प्रकारका हस्तरेखाहरू हुन्छन्। आज हामी तपाईँलाई हत्केलामा भएको यस्तै एउटा रेखाको बारेमा बताउँन गइरहेका छौ।
के हो हस्त रेखा?
हस्तरेखा शास्त्रको प्राचीन ज्ञानको आधारमा हत्केलाको रेखा मानिसको व्यक्तित्व र भविष्यको सम्भावना जस्तै करियर, जीवन, विवाह, धन र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू बताउँछ।
हातको रेखा हेरेर भविष्यको अनुमान लगाउन सकिने हजार वर्ष पहिलेनै हिन्दु ऋषि बालमीकिले ५६७ छन्द युक्त एक ग्रन्थमा उल्लेख गरेका थिए।
मिस्रका विद्वानका अनुसार सिकंदर महानको हातमा पनि यस्तो चिन्ह देखिएको पाइन्छ। सिकंदरको हत्केलामा बाहेक यस्तो चिन्ह अन्य व्यक्तिको हत्केलामा समेत देख्न सकिन्छ जुन संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र पाउन सकिन्छ।
भर्खरै हत्केलामा X रेखाको बारेमा जानकारी र यस्तो रेखा हुनेहरूको भाग्यको बारेमा गरिएको एक रिसर्च थियो मास्को युनिभर्सिटीमा। उक्त रिर्सचले एक पेपर नै निकालेका छ। उक्त विश्वविद्यालयमा भएको शोधमा शोधकर्ताले २ मिलियन मानिसको बारेमा जानकारी एकीकृत गरेका थिए।
जसमा जीवित वा मृत दुवै मानिसमा गरेको उक्त शोधका अनुसार जन मानिसको हातमा X चिन्ह हुन्छ उनीहरु ठूला नेता हुने, कोही व्यक्ति लोकप्रिय वा कोही व्यक्ति ठूला ठूला कामको लागि प्रसिद्ध भएको भेटिएका थिए। थप जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुहोस्।
थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् यो भिडियोमा …
२०७६ असार १७ गते १:४५ मा प्रकाशित
नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा सुरु, यस्ता हुँदैछन् निर्णय
डा.गोविन्द केसीद्धारा शिक्षा मन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग
सरकारले बेरोजगारलाई योग्यता र सीपअनुसारको रोजगारी दिदै